ကုလားတနျ၊ ဘင်ျဂလား၊ ယနျစီ နှငျ့ ဧရာဝတီ – Kyaw Zaw Oo's Blog
December 2, 2019 January 14, 2020 web_master
ကုလားတနျ၊ ဘင်ျဂလား၊ ယနျစီ နှငျ့ ဧရာဝတီ
ကုလားတန်၊ ဘင်္ဂလား၊ ယန်စီ နှင့် ဧရာဝတီ
ကုလားတန်မြစ် နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့ ဆုံရာ စစ်တွေမြို့ ပွိုင့်ကမ်းခြေမှာ ဒီဇင်ဘာလ တစ်ရက်နေ့ မနေ့က လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် လမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ စစ်တွေမြို့က တရုတ်အဘိုးကြီးတွေရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်က ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရင် စစ်တွေမြို့က တရုတ်အသိုက်အ၀န်းဟာ သူတို့ချစ်တဲ့ စစ်တွေမြို့မှာ စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်း သက်တောင့်သက်သာနဲ့ တသားတည်းဖြစ်နေကြတယ် ဆိုတာကို မြင်နိုင်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်ကနေတစ်ခါ ထွက်ခွာပြီး ရေကြည်ရာမြက်နုရာ နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေကြတဲ့ ရခိုင်ဇာတိ တရုတ်အသိုက်အ၀န်း နဲ့ နိုင်ငံတကာရောက် ရခိုင်အသိုက်အ၀န်းတို့ အပြန်အလှန် ကူညီနေကြတဲ့ သတင်းတွေကြားရင် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိရပါတယ်။
ပြောင်းရွှေ့ဝင်ရောက်လာသူတွေက အိမ်သစ်ယာသစ်တိုင်းပြည်မှာ အသားကျသွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို နိုင်ငံတကာမှာ assimilation သို့မဟုတ် integration လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဒီ integration ဖြစ်စဉ်ကို အလေးအနက်ထားပြီး အိမ်ရှင်တိုင်းပြည်တွေက လုပ်ပေးကြတယ်။ လုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။
assimilation သို့မဟုတ် integration ဖြစ်စဉ်ကို ခေါင်းထဲမှာ ဘာမှလည်းမရှိ၊ ရခိုင်တွေကို ခေါင်းမဖော်နိုင်ရေးအတွက် mုလားနဲ့ တစ်ဖက်လှည့်ကစားထားရမယ် ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပဲ ခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖဆပလအစိုးလက်ထက်ကနေ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်အထိ ပြည်မဗဟိုအစိုးရ အဆက်ဆက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရလက်ထက်ကတော့ ကိုယ့်အတတ်ကိုယ်စူးတာ သိသိသာသာ ခံစားလာရတဲ့ ကာလပေါ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်း ရခိုင်ဒေသအကြောင်းကို နားမလည်ခဲ့ဘူး။ အခုလည်း အရေလည်ပြီလား အရေမလည်သေးဘူးလားဆိုတာ ကျွန်တော်လည်း အသေအချာ မပြောတတ်သေးဘူး။)
ဖဆပလလက်ထက် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာ မဲနိုင်ဖို့အတွက် ဘူးသီးတောင် မောင်တော ဒေသခံအမတ် တစ်ဦးအပါအ၀င် ဖဆပလခေါင်းဆောင်များဟာ လှေအစီးပေါင်း ရာဂဏန်းအောက် ထိုစဉ်အရှေ့ပါကိစ္စတန် ယနေ့ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် လို့ခေါ်တဲ့ နေရာကနေ နတ်မြစ်ကိုဖြတ် ခိုးသွင်း နေရာချထားပေးပြီး လောလောလတ်လတ်လုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲထဲမှာ မဲပေးစေခဲ့တယ်။ ဒီလုပ်ရပ်မှာ ဦးနုရဲ့ သိခြင်း မသိခြင်း ညွှန်ကြားချက်ပေးခြင်း မပေးခြင်းကို အသေအချာမပြောနိုင်ပေမယ့် ဦးကျော်ငြိမ်းကတော့ အဲသည်အချိန်က ရခိုင်ဒေသ ဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပိုစိပ်တဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံညွှန်ကြားမှုတွေ ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ မနီးမဝေးကာလမှာ mုလားတွေက လောလောလတ်လတ် တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ (မုံဝန်းဗမာ လိုမျိုး) နာမည်တစ်ခုနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် မြန်မာ့အသံကနေ ကာလတိုတစ်ခု အသံလွှင့်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဖဆပလ ကာလမှာပေါ့။ ရခိုင်တွေကို ထိန်းဖို့ mုလားမွေးထားရမယ် ဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာလက်အောက်ခံ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွေကို အရှည်မပြောလိုတဲ့အတွက် အကျဉ်းချုံးပြောရရင် – မည်သို့မည်ပုံလုပ်လိုက်သည်မသိ မဆလ ခေတ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်ထဲက ရခိုင်-ဗမာပြည်မနယ်ခြားမြို့သုံးမြို့ ရခိုင်ရိုးမဖြတ် တောင်ကြားလမ်းသုံးလမ်းရှိရာ မြို့သုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ အမ်းမြို့နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ် နဲ့ ဂွမြို့နယ်တို့ဟာ mုလားကင်းစင်နယ်မြေ ဖြစ်သွားတယ်။ အဲသလို mုလားကင်းစင်နယ်မြေတွေ ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် mုလားတွေ (တစ်နည်း ဘင်္ဂါလီတွေဟာ) ကုန်းလမ်းဖြတ်ပြီး ဗမာပြည်မထဲကို ၀င်လို့မရတော့ဘူး။ mုလားတွေကို ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ ပိတ်လှောင်ထားလိုက်တယ်။ ရခိုင်တွေနဲ့ကစားဖို့ mုလားတွေကို မွေးထားလိုက်တယ်။ လိုအပ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေရောက်လာရင် ရခိုင်တွေရဲ့ ကျေးဇူးရှင်အဖြစ် လူမျိုးကြီးဝါဒီတွေက ၀င်ကပြလို့ရသေးတယ် ပေါ့လေ။
ဒါဟာ တကယ့်လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ assimilation / integration ရဲ့ ပြောင်းပြန် လုပ်ဆောင်တဲ့ မူဝါဒအမှားဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေဟာ နိုင်ငံအချုပ်အချာအာဏာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်၊ ဒီဥပဒေနဲ့ တိတိကျကျ အရေးယူဆောင်ရွက်သင့်တယ် လို့ ကျွန်တော်အမြဲတမ်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့များ နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလို့ နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်မရနိုင်တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ထားရမယ်လို့ မဖြစ်မနေ ဖြစ်လာတယ် ဆိုရင်တောင်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာ မထားဘဲ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ဆယ့်လေးခုမှာ အချိုးကျဖြန့်ဝေပြီးတော့ နေရာချထားသင့်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ်လောက်ကတည်းက ကျွန်တော် ခဏခဏပြောပါတယ်။ မိမိပါဝင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ကနေသော်လည်းကောင်း နီးစပ်တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို တိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဒီအယူအဆကို ဆက်တိုက် ဖြန့်ဝေ lobby လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ assimilation / integration လုပ်ကိုလုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကို အခြေခံပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီမဟုတ်တဲ့ လူဦးရေ နှစ်သန်းမျှသာရှိတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ဘင်္ဂါလီ လူဦးရေတစ်သန်းကို ဘယ်လိုမှ assimilation / integration မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ လူဦးရေ (၅၁) သန်းရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကသာ အဲသည်လူအုပ်စုကို assimilate လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲသလို assimilate လုပ်မှသာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံကို သစ္စာခံတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးစနစ်ထဲမှာ အခြားနိုင်ငံသားများနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစု ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲသလို assimilate မလုပ်နိုင်ရင် အဲသည်အုပ်စုဟာ သီးခြားအုပ်စုတစ်ခုအဖြစ် ပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့ အားကောင်းသထက် အားကောင်းလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ထိုးမယ့် ဓါးတစ်ချောင်း ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အခုတောင်မှ ဓါးခုတ်ချက်တွေ ချက်ကောင်းကိုထိလွန်းလို့ သွေးစိမ်းရှင်ရှင်ပန်းနေပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ်လောက်က ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားလိုလို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနဲ့ အလုပ်သဘောမပါတဲ့ ဆုံတွေ့မှုတစ်ခုမှာ အေးအေးသက်သာ ဆုံမိပါတယ်။ ကျွန်တော်က ရခိုင်ကပါ လို့ပြောတော့ သြော် ဟုတ်လား ဆိုပြီး ခဏနေတော့ သူက ပြောပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ရခိုင်တွေ mုလားတွေကို တော်တော်မုန်းတာပဲနော် လို့ သူကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က မမုန်းပါဘူး လို့ ချက်ချင်းပဲ ခပ်အေးအေး ပြန်ပြောပါတယ်။ သူက အံ့သြသွားပုံပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာကို စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်ပါတယ်။ နောက်တော့ ဟိုအကြောင်းသည်အကြောင်း လျှောက်ပြောနေကြတာပေါ့။ မကြာမီပဲ စကားအစပ် တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စစ်တွေမြို့နားမှာ သက်ကယ်ပြင်ဆိုတဲ့ mုလားရွာကြီး တစ်ရွာရှိတယ်၊ အဲသည်ရွာက mုလားတွေ ဗမာပြည်ဂိတ်တွေကို ရတဲ့နည်းနဲ့ကျော်လာပြီး ခင်ဗျားတို့ ရှမ်းပြည်နယ် နယ်စပ်မှာဗျ ရွာတွေ ကြီးကြီးမားမားတည်ပြီး နေကြတာကို ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ် ရွာနာမည်ကိုတောင် သက်ကယ်ပြင် လို့ နာမည်ပေးထားကြသဗျ ဆိုတော့ သူအံ့သြသွားပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေ အနည်းငယ် လင်းလက်သွားပါတယ်။ အနည်းငယ်လောက်တော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ ရှုးရှုှးရှားရှား ဖြစ်သွားခဲ့လိမ့်မယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ ခဏလေးအတွင်းမှာ mုလားမုန်းသူဟာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ အဖြေပေါ်သွားခဲ့တယ် လို့ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ရခိုင်တွေဟာ mုလားမုန်းတယ်နော် လို့ ခဏခဏ မမြှောက်ပေးကြပါနဲ့ လို့ လူမျိုးကြီးဝါဒီတွေကို ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်အန္တရာယ်ကို ကိုယ်သိပြီး အခြေအနေနဲ့ အကျိုးနဲ့ အကြောင်းနဲ့ စဉ်းစားတတ်ကြသူတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ရခိုင်တွေကို ကျေးဇူးကန်သူတွေလို့ မပြောကြပါနဲ့။ မိုဟက်မက်ကို ဆက်ခံသူများရဲ့ အစ္စလမ်မစ် ဆူလတန်နိတ်ဟာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြန့်ကားလို့ အိန္ဒိယကိုရောက်တဲ့အခါ ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ မဂိုအင်ပါယာဟာ အရှေ့ဘက်ကို တစ်ဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာရာကနေ ရခိုင်နိုင်ငံနဲ့တွေ့မှ ရပ်သွားတယ်ဆိုတာကို သတိတရနဲ့ ပြန်ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။ အခုလည်း အဲသည် အစ္စလမ်မစ် ဆူလတန်နိတ်ဟာ OIC ဆိုတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုယူပြီး သည်ရခိုင်နယ်စပ်ကနေ ကြီးကျယ်လှတဲ့စစ်ဆင်ရေးလုပ်နေတာကို နည်းမှန်လမ်းမှန် မခုခံဘဲ ရခိုင်ဆိုတဲ့ လူသေးသေးလေးကို ချီမပေးပြီး ရော့ ထိုး ထိုး နင်တို့ဓါးနဲ့ ရခိုင်ဝမ်းဗိုက်ကိုထိုး ငါတို့ကိုတော့ မထိုးနဲ့ ဆိုပြီးလုပ်နေတာကို ရပ်သင့်ပါပြီ။
ဒီစကားကို ခုနေချိန်မှာ ကျွန်တော် အလေးအနက်ပြောပါတယ်။ အလွန်လိမ္မာပါးနပ်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ကြတဲ့ ရခိုင်တွေကို အမြဲတမ်းပဲ ချာတိတ်တွေပါကွာလို့ ပြည်မနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ ပြည်မ နိုင်ငံရေးသမားအချို့ဟာ အခုထက်ထိ အခြေအနေမှန်ကို မမြင်နိုင်ကြသေးပါဘူး။ ဒီဘင်္ဂါလီပြဿနာဟာ ဒေါ်စုကို တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် အရင်လူတွေ (immediate predecessor) က အကွက်ဆင်ပြီး ချန်ထားခဲ့တဲ့ ပြဿနာလိုလို၊ ဒေါက်တာအေးမောင်ကို ဖမ်းတဲ့အတွက် ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေဘက်က သဘောထားသေးသိမ်ပြီး ဘင်္ဂါလီဘက်ကို ပင်းသလိုလို ပြောနေကြတာကို တွေ့နေတယ်။ ဒီကနေ့ထက်ထိ အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်နေမှန်းမသိ၊ ဗိုက်အောင့်တယ် ဆိုတဲ့ အပေါ်ယံလက္ခဏာကို ပြောပြမိရင် ရော့ ဗိုက်ပေါ် ပရုတ်ဆီလိမ်း ဆိုတဲ့လူတွေဟာ ဒီနိုင်ငံကို ဦးဆောင်ဖို့ကော သင့်တော်ပါရဲ့လား။ ဒီလူတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာကော ကျွန်တော်တို့ ရှိနေသင့်ပါသလား။
ရခိုင်တွေကို နားလည်ချင်ရင် ဒီကနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရရုံးဝင်းမှာ စိုက်ထူထားတဲ့ မင်းဘာကြီးရုပ်ထု ရှေ့မှာ အသေအချာ ရပ်ပြီး စဉ်းစားကြပါ။ မင်းဘာကြီးဟာ အနောက်ဘက်မှာ မိမိတို့ထက် အင်အားကြီးတဲ့ မဂိုအင်ပါယာ၊ ပင်လယ်ပြင်ကနေ ၀င်တိုက်တဲ့ ပေါ်တူဂီရေတပ်၊ အရှေ့ဘက်က မြန်မာပဒေသရာဇ် နိုင်ငံတို့ သုံးဘက်သုံးတန်ကြားမှာ အသိမ်းပိုက်မခံဘဲ အဆိပ်ပြင်းတဲ့နိုင်ငံငယ် အဖြစ်နဲ့ တည်ရှိနိုင်အောင် ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ ရှမ်းတို့ မွန်တို့နဲ့မတူ ရခိုင်တွေဟာ mုလားဖိအား၊ ဗမာဖိအား နဲ့ နိုင်ငံတကာဖိအားကို နှစ်ရာပေါင်းများစွာ ခံပြီး ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့လည်း ဒီသုံးခုကြားမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သေရေးရှင်ရေးကိစ္စတွေ အဆုံးဖြတ်ခံနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး သူများက၀င် ဆုံးဖြတ်တာ နည်းနိုင်သမျှနည်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်တာ များနိုင်သမျှများအောင် တရွေ့ရွေ့နဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်တွေကို ကျေးဇူးကန်းသူတွေလို့ မပြောကြပါနဲ့။ ရခိုင်တွေဆီက သဘာသယံဇာတတွေ အောတိုက်ယူထားသမျှ တပြားမှ ပြန်အကျိုးခံစားခွင့်မပေးဘဲ ထားတဲ့အထဲက ငါတို့ကဘာတွေ အကျိုးခံစားခွင့်ရနေသလဲ ဆိုတာကို အသေအချာ ပြန်စဉ်းစားပါ။
ရခိုင်တွေကို ကျေးဇူးကန်းသူတွေလို့ မပြောကြပါနဲ့။ မြန်မာစာပေမှာ အစောဆုံးရတုဟာ ရခိုင်တွေ ရေးခဲ့တဲ့ သိန်ကန်မိန်တွင် ရတု၊ အစောဆုံး ပျို့ကဗျာဟာ ရခိုင်တွေ ရေးခဲ့တဲ့ လောကသာရပျို့၊ အစောဆုံးဧချင်းဟာ ရခိုင်တွေ ရေးခဲ့တဲ့ ရခိုင်မင်းသမီးဧချင်း ဆိုတာ မကွယ်မ၀ှက် သိထားစေဖို့ လိုပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကိုလည်း တဇောက်ကန်းလို့ မပြောကြပါနဲ့။ Politics is the art of the possible. ဆိုတာနဲ့ Politic is the art of the impossible. ဆိုတဲ့ စကားနှစ်ရပ်စလုံးကို ကျွန်တော် အသေအချာ သုံးသပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေး ဦးတည်ရာက ဘာလဲလို့ မေးရင်တော့ တစ်ခုသော (၂၁) ရာစုပင်လုံ အစည်းအဝေးမှာ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ကိုယ်စား ဒေါက်တာအေးမောင် ဖတ်ကြားတင်သွင်းတဲ့ စာတမ်းကို လက်ညှိုးထိုးပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်စာတမ်းနောက်ဆုံး အချောသပ်ကို ကျွန်တော်နဲ့ ဒေါက်တာအေးမောင် အနုလုံ ပဋိလုံ ဆင်ခြင်ခဲ့ကြပြီး စာအချောကို ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာကပဲ ပရင့်ထုတ်ပြီး နေပြည်တော်အသွား ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲသည်စာတမ်းထက် ပိုပြောမိရင် ဒေါက်တာအေးမောင်ကဲ့သို့ ထောင်ထဲထည့်တာကို ခံရနိုင်တယ် ဆိုတာကိုလည်း သိပါတယ်။
၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်
ကုလားတနျမွဈ နဲ့ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတို့ ဆုံရာ စဈတှမွေို့ ပှိုငျ့ကမျးခွမှော ဒီဇငျဘာလ တဈရကျနေ့ မနကေ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျ လမျးလြှောကျနကွေတဲ့ စဈတှမွေို့က တရုတျအဘိုးကွီးတှရေဲ့ လူမှုကှနျရကျပျေါက ဓါတျပုံတှကေိုကွညျ့ရငျ စဈတှမွေို့က တရုတျအသိုကျအဝနျးဟာ သူတို့ခဈြတဲ့ စဈတှမွေို့မှာ စိတျပိုငျးရုပျပိုငျး သကျတောငျ့သကျသာနဲ့ တသားတညျးဖွဈနကွေတယျ ဆိုတာကို မွငျနိုငျပါတယျ။
ရခိုငျပွညျကနတေဈခါ ထှကျခှာပွီး ရကွေညျရာမွကျနုရာ နိုငျငံတကာမှာ ရောကျနကွေတဲ့ ရခိုငျဇာတိ တရုတျအသိုကျအဝနျး နဲ့ နိုငျငံတကာရောကျ ရခိုငျအသိုကျအဝနျးတို့ အပွနျအလှနျ ကူညီနကွေတဲ့ သတငျးတှကွေားရငျ ဝမျးမွောကျဝမျးသာ ဖွဈမိရပါတယျ။
ပွောငျးရှဝေ့ငျရောကျလာသူတှကေ အိမျသဈယာသဈတိုငျးပွညျမှာ အသားကသြှားတဲ့ ဖွဈစဉျကို နိုငျငံတကာမှာ assimilation သို့မဟုတျ integration လို့ ချေါကွတယျ။ ဒီ integration ဖွဈစဉျကို အလေးအနကျထားပွီး အိမျရှငျတိုငျးပွညျတှကေ လုပျပေးကွတယျ။ လုပျဆောငျတတျကွပါတယျ။
assimilation သို့မဟုတျ integration ဖွဈစဉျကို ခေါငျးထဲမှာ ဘာမှလညျးမရှိ၊ ရခိုငျတှကေို ခေါငျးမဖျောနိုငျရေးအတှကျ mုလားနဲ့ တဈဖကျလှညျ့ကစားထားရမယျ ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပဲ ခေါငျးထဲမှာထညျ့ပွီး ဖဆပလအစိုးလကျထကျကနေ ဦးသိနျးစိနျအစိုးရလကျထကျအထိ ပွညျမဗဟိုအစိုးရ အဆကျဆကျ လုပျဆောငျခဲ့ကွတယျ။ (ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဦးဆောငျတဲ့ အစိုးရလကျထကျကတော့ ကိုယျ့အတတျကိုယျစူးတာ သိသိသာသာ ခံစားလာရတဲ့ ကာလပေါ့။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဟာလညျး ရခိုငျဒသေအကွောငျးကို နားမလညျခဲ့ဘူး။ အခုလညျး အရလေညျပွီလား အရမေလညျသေးဘူးလားဆိုတာ ကြှနျတျောလညျး အသအေခြာ မပွောတတျသေးဘူး။)
ဖဆပလလကျထကျ ရှေးကောကျပှဲတဈခုမှာ မဲနိုငျဖို့အတှကျ ဘူးသီးတောငျ မောငျတော ဒသေခံအမတျ တဈဦးအပါအဝငျ ဖဆပလခေါငျးဆောငျမြားဟာ လှအေစီးပေါငျး ရာဂဏနျးအောကျ ထိုစဉျအရှပေ့ါကိစ်စတနျ ယနေ့ ဘင်ျဂလာဒရှေျ့ လို့ချေါတဲ့ နရောကနေ နတျမွဈကိုဖွတျ ခိုးသှငျး နရောခထြားပေးပွီး လောလောလတျလတျလုပျတဲ့ ရှေးကောကျပှဲထဲမှာ မဲပေးစခေဲ့တယျ။ ဒီလုပျရပျမှာ ဦးနုရဲ့ သိခွငျး မသိခွငျး ညှနျကွားခကျြပေးခွငျး မပေးခွငျးကို အသအေခြာမပွောနိုငျပမေယျ့ ဦးကြျောငွိမျးကတော့ အဲသညျအခြိနျက ရခိုငျဒသေ ဖဆပလခေါငျးဆောငျတှနေဲ့ ပိုစိပျတဲ့ ထိတှဆေ့ကျဆံညှနျကွားမှုတှေ ရှိနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒါနဲ့ မနီးမဝေးကာလမှာ mုလားတှကေ လောလောလတျလတျ တီထှငျဖနျတီးလိုကျတဲ့ (မုံဝနျးဗမာ လိုမြိုး) နာမညျတဈခုနဲ့ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးတဈမြိုးအဖွဈ မွနျမာ့အသံကနေ ကာလတိုတဈခု အသံလှငျ့ခှငျ့ပွုခဲ့ပါတယျ။ ဖဆပလ ကာလမှာပေါ့။ ရခိုငျတှကေို ထိနျးဖို့ mုလားမှေးထားရမယျ ဆိုတဲ့ အိုငျဒီယာလကျအောကျခံ လုပျရပျဖွဈပါတယျ။
ဇာတျလမျးတှကေို အရှညျမပွောလိုတဲ့အတှကျ အကဉျြးခြုံးပွောရရငျ – မညျသို့မညျပုံလုပျလိုကျသညျမသိ မဆလ ခတျေအတှငျး ရခိုငျပွညျထဲက ရခိုငျ-ဗမာပွညျမနယျခွားမွို့သုံးမွို့ ရခိုငျရိုးမဖွတျ တောငျကွားလမျးသုံးလမျးရှိရာ မွို့သုံးမွို့ဖွဈတဲ့ အမျးမွို့နယျ၊ တောငျကုတျမွို့နယျ နဲ့ ဂှမွို့နယျတို့ဟာ mုလားကငျးစငျနယျမွေ ဖွဈသှားတယျ။ အဲသလို mုလားကငျးစငျနယျမွတှေေ ဖွဈသှားတဲ့အတှကျ mုလားတှေ (တဈနညျး ဘင်ျဂါလီတှဟော) ကုနျးလမျးဖွတျပွီး ဗမာပွညျမထဲကို ဝငျလို့မရတော့ဘူး။ mုလားတှကေို ရခိုငျပွညျထဲမှာ ပိတျလှောငျထားလိုကျတယျ။ ရခိုငျတှနေဲ့ကစားဖို့ mုလားတှကေို မှေးထားလိုကျတယျ။ လိုအပျတဲ့ ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတှရေောကျလာရငျ ရခိုငျတှရေဲ့ ကြေးဇူးရှငျအဖွဈ လူမြိုးကွီးဝါဒီတှကေ ဝငျကပွလို့ရသေးတယျ ပေါ့လေ။
ဒါဟာ တကယျ့လုပျဆောငျသငျ့တဲ့ လုပျရပျဖွဈတဲ့ assimilation / integration ရဲ့ ပွောငျးပွနျ လုပျဆောငျတဲ့ မူဝါဒအမှားဖွဈပါတယျ။
၁၉၈၂ မွနျမာနိုငျငံသားဥပဒဟော နိုငျငံအခြုပျအခြာအာဏာနဲ့ ဆိုငျတဲ့ကိစ်စဖွဈတယျ၊ ဒီဥပဒနေဲ့ တိတိကကြ အရေးယူဆောငျရှကျသငျ့တယျ လို့ ကြှနျတျောအမွဲတမျး ပွောခဲ့ပါတယျ။ တကယျလို့မြား နိုငျငံသားဥပဒနေဲ့တိုကျဆိုငျစဈဆေးလို့ နိုငျငံသားဖွဈပိုငျခှငျ့မရနိုငျတဲ့ ဘင်ျဂါလီတှကေို အစီအစဉျတဈခုအနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံထဲမှာ ထားရမယျလို့ မဖွဈမနေ ဖွဈလာတယျ ဆိုရငျတောငျမှ ရခိုငျပွညျနယျတဈခုထဲမှာ မထားဘဲ တိုငျးနဲ့ ပွညျနယျ ဆယျ့လေးခုမှာ အခြိုးကဖြွနျ့ဝပွေီးတော့ နရောခထြားသငျ့တယျ ဆိုတဲ့အကွောငျးကို လှနျခဲ့တဲ့ ရှဈနှဈလောကျကတညျးက ကြှနျတျော ခဏခဏပွောပါတယျ။ မိမိပါဝငျနတေဲ့ နိုငျငံရေးပါတီ ကနသေျောလညျးကောငျး နီးစပျတဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေို တိုကျတှနျးခွငျးအားဖွငျ့ သျောလညျးကောငျး၊ လူမှုအဖှဲ့အစညျးတှမှော ဆှေးနှေးခွငျးအားဖွငျ့သျောလညျးကောငျး ဒီအယူအဆကို ဆကျတိုကျ ဖွနျ့ဝေ lobby လုပျခဲ့ပါတယျ။
ဒါဟာ assimilation / integration လုပျကိုလုပျရမယျ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို အခွခေံပါတယျ။ ဘင်ျဂါလီမဟုတျတဲ့ လူဦးရေ နှဈသနျးမြှသာရှိတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျဟာ ဘင်ျဂါလီ လူဦးရတေဈသနျးကို ဘယျလိုမှ assimilation / integration မလုပျနိုငျတော့ပါဘူး။ လူဦးရေ (၅၁) သနျးရှိတဲ့ မွနျမာနိုငျငံကသာ အဲသညျလူအုပျစုကို assimilate လုပျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ အဲသလို assimilate လုပျမှသာလြှငျ မွနျမာနိုငျငံကို သစ်စာခံတဲ့ မွနျမာ့စီးပှားရေးစနဈထဲမှာ အခွားနိုငျငံသားမြားနဲ့အတူ ပူးပေါငျးပါဝငျနတေဲ့ ကုနျထုတျစှမျးအားစု ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။ အဲသလို assimilate မလုပျနိုငျရငျ အဲသညျအုပျစုဟာ သီးခွားအုပျစုတဈခုအဖွဈ ပုံသဏ်ဍာနျအနနေဲ့ အားကောငျးသထကျ အားကောငျးလာပွီး မွနျမာနိုငျငံကို ထိုးမယျ့ ဓါးတဈခြောငျး ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ အခုတောငျမှ ဓါးခုတျခကျြတှေ ခကျြကောငျးကိုထိလှနျးလို့ သှေးစိမျးရှငျရှငျပနျးနပေါပွီ။
လှနျခဲ့တဲ့ ရှဈနှဈလောကျက ရှမျးနိုငျငံရေးသမားလိုလို ပုဂ်ဂိုလျတဈဦးနဲ့ အလုပျသဘောမပါတဲ့ ဆုံတှမှေု့တဈခုမှာ အေးအေးသကျသာ ဆုံမိပါတယျ။ ကြှနျတျောက ရခိုငျကပါ လို့ပွောတော့ သွျော ဟုတျလား ဆိုပွီး ခဏနတေော့ သူက ပွောပါတယျ။ ခငျဗြားတို့ ရခိုငျတှေ mုလားတှကေို တျောတျောမုနျးတာပဲနျော လို့ သူကပွောပါတယျ။ ကြှနျတျောက မမုနျးပါဘူး လို့ ခကျြခငျြးပဲ ခပျအေးအေး ပွနျပွောပါတယျ။ သူက အံ့သွသှားပုံပွီး ကြှနျတေျာ့မကျြနှာကို စစေ့စေ့ပျစပျ ကွညျ့ပါတယျ။ နောကျတော့ ဟိုအကွောငျးသညျအကွောငျး လြှောကျပွောနကွေတာပေါ့။ မကွာမီပဲ စကားအစပျ တဈခုမှာ ကြှနျတျောကပွောပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ စဈတှမွေို့နားမှာ သကျကယျပွငျဆိုတဲ့ mုလားရှာကွီး တဈရှာရှိတယျ၊ အဲသညျရှာက mုလားတှေ ဗမာပွညျဂိတျတှကေို ရတဲ့နညျးနဲ့ကြျောလာပွီး ခငျဗြားတို့ ရှမျးပွညျနယျ နယျစပျမှာဗြ ရှာတှေ ကွီးကွီးမားမားတညျပွီး နကွေတာကို ကြှနျတျောတှခေဲ့တယျ ရှာနာမညျကိုတောငျ သကျကယျပွငျ လို့ နာမညျပေးထားကွသဗြ ဆိုတော့ သူအံ့သွသှားပါတယျ။ သူ့မကျြလုံးတှေ အနညျးငယျ လငျးလကျသှားပါတယျ။ အနညျးငယျလောကျတော့ သူ့စိတျထဲမှာ ရှုးရှုှးရှားရှား ဖွဈသှားခဲ့လိမျ့မယျ လို့ ထငျပါတယျ။ ခဏလေးအတှငျးမှာ mုလားမုနျးသူဟာ ဘယျသူလဲ ဆိုတာ အဖွပေျေါသှားခဲ့တယျ လို့ထငျပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ကိုလညျး ရခိုငျတှဟော mုလားမုနျးတယျနျော လို့ ခဏခဏ မမွှောကျပေးကွပါနဲ့ လို့ လူမြိုးကွီးဝါဒီတှကေို ကြှနျတျောမတ်ေတာရပျခံခငျြပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ ကိုယျ့အန်တရာယျကို ကိုယျသိပွီး အခွအေနနေဲ့ အကြိုးနဲ့ အကွောငျးနဲ့ စဉျးစားတတျကွသူတှသောဖွဈကွပါတယျ။
နောကျပွီးတော့ ရခိုငျတှကေို ကြေးဇူးကနျသူတှလေို့ မပွောကွပါနဲ့။ မိုဟကျမကျကို ဆကျခံသူမြားရဲ့ အစ်စလမျမဈ ဆူလတနျနိတျဟာ ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ ပွနျ့ကားလို့ အိန်ဒိယကိုရောကျတဲ့အခါ ဖွဈထှနျးလာတဲ့ မဂိုအငျပါယာဟာ အရှဘေ့ကျကို တဈဖွညျးဖွညျးရှတေို့းလာရာကနေ ရခိုငျနိုငျငံနဲ့တှမှေ့ ရပျသှားတယျဆိုတာကို သတိတရနဲ့ ပွနျကြေးဇူးတငျသငျ့ပါတယျ။ အခုလညျး အဲသညျ အစ်စလမျမဈ ဆူလတနျနိတျဟာ OIC ဆိုတဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျကိုယူပွီး သညျရခိုငျနယျစပျကနေ ကွီးကယျြလှတဲ့စဈဆငျရေးလုပျနတောကို နညျးမှနျလမျးမှနျ မခုခံဘဲ ရခိုငျဆိုတဲ့ လူသေးသေးလေးကို ခြီမပေးပွီး ရော့ ထိုး ထိုး နငျတို့ဓါးနဲ့ ရခိုငျဝမျးဗိုကျကိုထိုး ငါတို့ကိုတော့ မထိုးနဲ့ ဆိုပွီးလုပျနတောကို ရပျသငျ့ပါပွီ။
ဒီစကားကို ခုနခြေိနျမှာ ကြှနျတျော အလေးအနကျပွောပါတယျ။ အလှနျလိမ်မာပါးနပျတယျလို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုထငျကွတဲ့ ရခိုငျတှကေို အမွဲတမျးပဲ ခြာတိတျတှပေါကှာလို့ ပွညျမနိုငျငံရေးသုံးသပျသူ ပွညျမ နိုငျငံရေးသမားအခြို့ဟာ အခုထကျထိ အခွအေနမှေနျကို မမွငျနိုငျကွသေးပါဘူး။ ဒီဘင်ျဂါလီပွဿနာဟာ ဒျေါစုကို တိုကျခိုကျဖို့အတှကျ အရငျလူတှေ (immediate predecessor) က အကှကျဆငျပွီး ခနျြထားခဲ့တဲ့ ပွဿနာလိုလို၊ ဒေါကျတာအေးမောငျကို ဖမျးတဲ့အတှကျ ရခိုငျနိုငျငံရေးသမားတှဘေကျက သဘောထားသေးသိမျပွီး ဘင်ျဂါလီဘကျကို ပငျးသလိုလို ပွောနကွေတာကို တှနေ့တေယျ။ ဒီကနထေ့ကျထိ အစာအိမျရောဂါဖွဈနမှေနျးမသိ၊ ဗိုကျအောငျ့တယျ ဆိုတဲ့ အပျေါယံလက်ခဏာကို ပွောပွမိရငျ ရော့ ဗျိုကျပျေါ ပရုတျဆီလိမျး ဆိုတဲ့လူတှဟော ဒီနိုငျငံကို ဦးဆောငျဖို့ကော သငျ့တျောပါရဲ့လား။ ဒီလူတှရေဲ့ ဦးဆောငျမှုအောကျမှာကော ကြှနျတျောတို့ ရှိနသေငျ့ပါသလား။
ရခိုငျတှကေို နားလညျခငျြရငျ ဒီကနေ့ ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရရုံးဝငျးမှာ စိုကျထူထားတဲ့ မငျးဘာကွီးရုပျထု ရှမှေ့ာ အသအေခြာ ရပျပွီး စဉျးစားကွပါ။ မငျးဘာကွီးဟာ အနောကျဘကျမှာ မိမိတို့ထကျ အငျအားကွီးတဲ့ မဂိုအငျပါယာ၊ ပငျလယျပွငျကနေ ဝငျတိုကျတဲ့ ပျေါတူဂီရတေပျ၊ အရှဘေ့ကျက မွနျမာပဒသေရာဇျ နိုငျငံတို့ သုံးဘကျသုံးတနျကွားမှာ အသိမျးပိုကျမခံဘဲ အဆိပျပွငျးတဲ့နိုငျငံငယျ အဖွဈနဲ့ တညျရှိနိုငျအောငျ ဦးဆောငျခဲ့တယျ။ ရှမျးတို့ မှနျတို့နဲ့မတူ ရခိုငျတှဟော mုလားဖိအား၊ ဗမာဖိအား နဲ့ နိုငျငံတကာဖိအားကို နှဈရာပေါငျးမြားစှာ ခံပွီး ရပျတညျနိုငျအောငျ ကွိုးစားကွသူမြား ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနလေ့ညျး ဒီသုံးခုကွားမှာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ သရေေးရှငျရေးကိစ်စတှေ အဆုံးဖွတျခံနကွေရတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး သူမြားကဝငျ ဆုံးဖွတျတာ နညျးနိုငျသမြှနညျးပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို ဆုံးဖွတျနိုငျတာ မြားနိုငျသမြှမြားအောငျ တရှရှေ့နေဲ့ လုပျဆောငျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
ရခိုငျတှကေို ကြေးဇူးကနျးသူတှလေို့ မပွောကွပါနဲ့။ ရခိုငျတှဆေီက သဘာသယံဇာတတှေ အောတိုကျယူထားသမြှ တပွားမှ ပွနျအကြိုးခံစားခှငျ့မပေးဘဲ ထားတဲ့အထဲက ငါတို့ကဘာတှေ အကြိုးခံစားခှငျ့ရနသေလဲ ဆိုတာကို အသအေခြာ ပွနျစဉျးစားပါ။
ရခိုငျတှကေို ကြေးဇူးကနျးသူတှလေို့ မပွောကွပါနဲ့။ မွနျမာစာပမှော အစောဆုံးရတုဟာ ရခိုငျတှေ ရေးခဲ့တဲ့ သိနျကနျမိနျတှငျ ရတု၊ အစောဆုံး ပြို့ကဗြာဟာ ရခိုငျတှေ ရေးခဲ့တဲ့ လောကသာရပြို့၊ အစောဆုံးဧခငျြးဟာ ရခိုငျတှေ ရေးခဲ့တဲ့ ရခိုငျမငျးသမီးဧခငျြး ဆိုတာ မကှယျမဝှကျ သိထားစဖေို့ လိုပါတယျ။
ကြှနျတေျာ့ကိုလညျး တဇောကျကနျးလို့ မပွောကွပါနဲ့။ Politics is the art of the possible. ဆိုတာနဲ့ Politic is the art of the impossible. ဆိုတဲ့ စကားနှဈရပျစလုံးကို ကြှနျတျော အသအေခြာ သုံးသပျပါတယျ။
ကြှနျတေျာ့ရဲ့ လကျရှိနိုငျငံရေး ဦးတညျရာက ဘာလဲလို့ မေးရငျတော့ တဈခုသော (၂၁) ရာစုပငျလုံ အစညျးအဝေးမှာ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ ကိုယျစား ဒေါကျတာအေးမောငျ ဖတျကွားတငျသှငျးတဲ့ စာတမျးကို လကျညှိုးထိုးပွရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲသညျစာတမျးနောကျဆုံး အခြောသပျကို ကြှနျတျောနဲ့ ဒေါကျတာအေးမောငျ အနုလုံ ပဋိလုံ ဆငျခွငျခဲ့ကွပွီး စာအခြောကို ကြှနျတေျာ့ ကှနျပြူတာကပဲ ပရငျ့ထုတျပွီး နပွေညျတျောအသှား ထညျ့ပေးလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
အဲသညျစာတမျးထကျ ပိုပွောမိရငျ ဒေါကျတာအေးမောငျကဲ့သို့ ထောငျထဲထညျ့တာကို ခံရနိုငျတယျ ဆိုတာကိုလညျး သိပါတယျ။
၂၀၁၉ ဒီဇငျဘာလ (၂) ရကျ
Previous လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျရကျစကျမှုတှကေို လကျမခံဘူး၊ ဒါပမေဲ့ ဘင်ျဂါလီတှကေို ဘင်ျဂါလီလို့ပဲ ချေါရပါမယျ
Next ဟာဂြီ ဦးအေးလှငျကို ယုံထိုကျ မယုံထိုကျ